Ukudla kwe-Dukan kuyindlela ephumelelayo yokukhipha isisindo esingaphezu kokucindezeleka. Incazelo eningiliziwe.
Ukwehlisa isisindo isikhathi eside kuzosiza ekudleni kukaDukan
Iyini uhlelo lokunikezwa kwamandla lwe-Dyukan. Incazelo eningiliziwe yokudla kwe-Ducane
Udokotela waseFrance uP Pierre Duccan wenza inguquko yangempela kuma-dietetics. Wakha uhlelo olukhethekile lokudla okunomsoco, okukuvumela ukuba ulahlekelwe isisindo, ngaphandle kokudumala umzimba ngokulamba.
Umlobi wokudla ngokusebenza ngumhlengikazi wezinzwa. Noma kunjalo, waba nesithakazelo ezimisweni zokudla okunempilo, lapho umngane wakhe edinga usizo olukhulu ekulwa nokukhuluphala. Ngaleso sikhathi uDuncan wakhula ukudla kwakhe, manje osezuze abesifazane abangaphezu kwezigidi ezinhlanu besilisa emhlabeni wonke, kuhlanganise nobuntu obudumile njengoPenelope Cruz, uJennifer Lopez noKate Middleton.
Incazelo eningiliziwe yokudla kukaDucane
Mhlawumbe izindaba ezimnandi kunazo zonke kulabo abaye baquma ukuzama le ndlela yokulahlekelwa isisindo ngokwabo kuzoba ukuthi umbhali walesi simiso sokudla uyaqonda ukujula kokuhlupheka kwabantu ngenkathi eyanqabela ekudleni. Ngakho-ke, isisekelo sokudla akuyona imingcele emikhiqizweni, kodwa isinqumo esifanele.
Vumelana, kuhle ukuqonda ukuthi ukuhlala ekudleni, awudingi ukubala zonke ikhalori futhi uhlushwa yizinhlungu zenembeza ngenxa yesobho.
Noma kunjalo, kufanele kukhunjulwe ukuthi ukudla kwe-Ducane akuyona indlela ebonisa ukulahlekelwa isisindo. Lolu hlelo luzodingeka ludliwe izinyanga ezimbalwa. Emva kwalokho, lo mhlengikazi ngokwakhe uvuma ukukhanya kwe-gastronomic "ama-pranks", kodwa ngokuvamile abantu bajwayele ukudla ngokusho kwe-Dyukan futhi bangashintshi izimiso zokwenza ukudla.
I-Ducane yokudla inezinyathelo ezine. Amabili okuqala ahloswe ngqo ekushiseni amafutha amaningi, futhi amabili okugcina - ukuqiniswa kwesisindo nokugcina isimo.
Ake sicabangele incazelo eningiliziwe yesigaba ngasinye.
Isigaba esisodwa. Ukuhlaselwa
Ukubheka igama, lesi sigaba sigxile ekulahlekelweni kwesisindo esisebenzayo. Ngokuvamile kuvame izinsuku ezingu-3-10, kuye ngokuthi ufuna ukusetha kabusha kangakanani. Kuzodingeka izinsuku ezintathu zokushisa ama-kilogram ayishumi noma ngaphansi, ezintathu kuya kwezihlanu - ukulahlekelwa yi-10-20 kilogram. Futhi uma udinga ukususa kufika ku-30 ​​kg, khona-ke ukuhlaselwa kungapheli izinsuku eziyishumi.
Ngalesi sikhathi, imikhiqizo yamaprotheni kuphela evunyelwe. Ukugaya ukudla okunjalo, umzimba uchitha amandla amaningi kunalokho owamukelayo.
Nasi imenyu yesibonelo se-Attack
Ukudla kwasekuseni: i-omelet yamaprotheni amathathu nama-fat fat fat, fish (1 piece), itiye noma ikhofi.
Usuku lokudla: inyama yenkomo noma inkukhu. Inyama ingabiliswa noma ifakwe ngezinongo.
Inyoka: noma yimaphi ama-seafood aneziqephu zeshizi
Isidlo: i-yogurt noma i-kefir ephansi yamafutha, ucezu lwezinhlanzi.
Imikhiqizo etholakalayo inconywa ngaphandle kwamafutha, futhi kusukela kuma-saladi ukukhipha imayonnaise namafutha yemifino. Ngokubuyisela, sebenzisa ijusi lemon.
Futhi kuyadingeka ukuphuza amanzi amaningi ngaphandle kwegesi, Cishe ingxenye eyodwa nengxenye kuya kwamalitha amabili ngosuku.
Ngaphandle kwezibonelo ezingenhla zokudla, uDucane uyavuma ukusetshenziswa kwemikhiqizo enjalo:
inyama: yenkomo, i-veal, ingulube noma izinkukhu. Kudingeka ngaphandle kwesikhumba namafutha
izinhlanzi nezilwane zasolwandle
ubisi nemikhiqizo yobisi yamafutha aphansi
isibindi, izinso, ulimi
amaqanda ezinkukhu kanye nezigwaca
Isigaba ezimbili. I-Cruise
Elinye igama lesi sigaba singu-alternation. Ngakho kwathiwa ngoba ngaphezu kokudla kwamaprotheni, ezinye izitshalo zenezelwe ekudleni. Kudingeka udle ukudla okunezinye amaprotheni, bese uhlanganisa amaprotheni nemifino.
Ngokwesiko, ngalesi sigaba, ukulahleka kwesisindo kwenzeka ngendlela evamile. Kodwa isikhathi saso asikwazi ukuqhutshelwa kunoma yiluphi uhlaka. Ukuze udle, ngakho-ke, udinga ukufeza ukulahlekelwa kwesisindo esidingekayo.
i-asparagusi nobhontshisi obuluhlaza
isipinashi, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
noma yiluphi uhlobo lweklabishi
zucchini, isitshalo seqanda
Izaqathe kanye ne-beet - kuphela ngezikhathi ezithile.
okusanhlamvu kanye ne-pasta
ubhontshisi (hhayi i-pod), i-peas, ubhontshisi, i-lentils
Isigaba sesithathu. Ukuqinisa
Isikhathi sokubuyela kancane kancane ekudleni okujwayelekile. Kumikhiqizo engenhla yezigaba ezimbili zangaphambilini, kancane kancane ngesinkwa esingeziwe, ilayisi, i-pasta, izithelo namaswidi.
Ukuqina kuzokugcina kuye ngokuthi kunzima kangakanani ukukwazi ukusetha kabusha. Uma u-5 kg, bese kuthi izinsuku ezingu-50, uma u-10-ke eyi-100, njll. Isimo sokugunyazwa: kanye ngesonto ukuhlela usuku lweprotheyini.
Isigaba sesine. Ukuzinza
Lesi sigaba, empeleni, asifani naleso sangaphambilini. U-Dukan uncoma ukunamathela kuloku kudliwa izinsuku eziyisithupha, kanti eyesikhombisa ukwenza amaprotheni. Ukuvivinya okunamandla kakhulu.
Isimo esibalulekile kuphela okufanele sibonwe kuzo zonke izigaba ezintathu ukudla izipuni ezimbili ze-oat bran nsuku zonke ukuvimbela ukuqothulwa, okungenakugwema ngokudla okuningi kwamaprotheni.
Imibono mayelana nokudla kukaDucane
"Ngemva kokuzalwa kwendodanami, ngatholwa nge-20 kg. Endaweni ethile kwi-intanethi ngakhubeka ngephutha ngalokhu kudla. Esigabeni sokuqala, ngilahla u-6 kg, bese inqubo imile. Kodwa okwamanje isigamu sonyaka ngilahlekelwe yi-11 kg. "
"Ngangihlale nginezinkinga zesisindo. Engingazange ngizame, cishe ngilamba izinsuku. Ukudla kukaDukan kuphela kwasiza. Kwaphela kwakungenzeka ukuphonsa 22 kg. Ekuqaleni kwakukhona izinkinga nokuqothulwa futhi nginqume ukuthi ukudla akusizi futhi cishe akuphulanga. Ngakho-ke udle i-bran. "
Ukudla okunobungozi empilweni
Imithetho eyisisekelo yokuzivocavoca komzimba
Ukulahlekelwa isisindo ngendlela ye-Semenov
Ungasusa kanjani izinhlangothi emavikini amabili?
Ukuzivocavoca umzimba okwehlisa isisindo emva kokubeletha
Indlela yokunciphisa ukudla kwamakhambi abantu
Indlela elula ka-Allen Carr yokulahlekelwa isisindo
Amakhekhe we-chocolate e-glaze
I-liposuction yesigungu sesibili
Inkabi igobile ebhiya ngesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
Indlela yokuhamba ngendlela efanele
Isobho se-Milk nelayisi
Ubuhlungu obuzungeza inkaba - kungaba njani?
Imisebenzi yezandla zika-Easter zeSonto LikaNkulunkulu
Indlela yokukhetha umqhubi womntanakho
Izibhamu ngaphansi kwamehlo wengane
Amazambane egolide anesinamakha avela kuhhavini ye-microwave
Ikhaya lamakhemikhali elibhekayo: indlela yokwenza kahle
I-Stew in izimbiza
Amathiphu angu-10 omshado wombhangqwana osemusha